X2Coin စျေး - အွန်လိုင်း X2 ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို X2Coin (X2)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ X2Coin (X2) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ X2Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ X2Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
X2Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
X2CoinX2 သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00004X2CoinX2 သို့ ယူရိုEUR€0.00003X2CoinX2 သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00003X2CoinX2 သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00003X2CoinX2 သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.000326X2CoinX2 သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00023X2CoinX2 သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.000807X2CoinX2 သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000136X2CoinX2 သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00005X2CoinX2 သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00005X2CoinX2 သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00081X2CoinX2 သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000282X2CoinX2 သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000196X2CoinX2 သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00273X2CoinX2 သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.00615X2CoinX2 သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00005X2CoinX2 သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00006X2CoinX2 သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00113X2CoinX2 သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000253X2CoinX2 သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.00389X2CoinX2 သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.0432X2CoinX2 သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0141X2CoinX2 သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00267X2CoinX2 သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.001
X2CoinX2 သို့ BitcoinBTC0.000000003 X2CoinX2 သို့ EthereumETH0.00000009 X2CoinX2 သို့ LitecoinLTC0.0000007 X2CoinX2 သို့ DigitalCashDASH0.0000004 X2CoinX2 သို့ MoneroXMR0.0000004 X2CoinX2 သို့ NxtNXT0.00284 X2CoinX2 သို့ Ethereum ClassicETC0.000005 X2CoinX2 သို့ DogecoinDOGE0.0105 X2CoinX2 သို့ ZCashZEC0.0000004 X2CoinX2 သို့ BitsharesBTS0.00112 X2CoinX2 သို့ DigiByteDGB0.00117 X2CoinX2 သို့ RippleXRP0.000129 X2CoinX2 သို့ BitcoinDarkBTCD0.000001 X2CoinX2 သို့ PeerCoinPPC0.000121 X2CoinX2 သို့ CraigsCoinCRAIG0.0166 X2CoinX2 သို့ BitstakeXBS0.00155 X2CoinX2 သို့ PayCoinXPY0.000636 X2CoinX2 သို့ ProsperCoinPRC0.00457 X2CoinX2 သို့ YbCoinYBC0.00000002 X2CoinX2 သို့ DarkKushDANK0.0117 X2CoinX2 သို့ GiveCoinGIVE0.0789 X2CoinX2 သို့ KoboCoinKOBO0.0083 X2CoinX2 သို့ DarkTokenDT0.00003 X2CoinX2 သို့ CETUS CoinCETI0.105